Fizarana fanampiana avy amin’ny fanjakana: feno mpitokona ny ankamaroan’ny fokontany… | NewsMada
Horakoraka, tabataba, fifanjevoana ary fitohanana eraky ny lalàna… Nanisana, Andraisoro, Ankadikely Ilafy, Alasora, Ambatobe, Ankatso, Androndra, Anosizato atsinana, Andranomanalina Isotry, Andohatapenaka … Isan’ireo toerana nahitana fitokonana marobe niandry ny fanampiana ara-tsosialy nampanantenain’ny fanjakana.
Tsy voahaja intsony ny elanelana, tsy misy miraharaha koa ny fihetsika fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19.
Nitaraina ireo mponina fa misy amin’ireo olona efa nahazo tamin’ny fanampiana teo aloha ihany no mbola nisitraka izany tamin’ity andiany manaraka ity. Nilaza koa izy ireo fa tsy mazava ny fitantanana ary voatonontonona matetika ny sefo fokontany amin’izany. « Tety aminay izao tamin’ny talata tamin’ny 08 ora alina ny fizarana ny tapakila. Ary ireo efa nahazo fanampiana tamin’ny voloahany ihany no mbola nahazo izany », hoy ny fanazavan’ny mpitokona teny Ankadikely Ilafy, omaly. Misy amin’ireo mponina no efa tonga teny amin’ny toerana izarana ny fanampiana, omaly, tamin’ny 7 ora maraina niandry izany, saingy mbola tsy nahazo. Vokany, maro ireo tezitra sy nitabataba teny an-toerana. « Ny teo anivon’ny kaominina no nanitsy ny lisitra fandaminana ny sosialim-bahoaka. Ny komitim-paritra no mahay ny olona tena sahirana eo amin’ny faritra misy azy. Efa nalefa eny amin’ny kaominina ilay lisitra, ry zareo indray no manamarina ireo anarana sao misy ireo olona fa nahazo tamin’ny andiany voalohany no miverina ao ka manala izany. Ary fenoina amin’ireo 628 nanao fitarainana mbola tsy nahazo ny fanampiana izany », hoy Randrianasolo Bien Aimé, sefo fokontany Ilafy.
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola maro ireo olona mitangorona eny Anka­dikely, miandry ny fanampiana. « Miisa 700 ireo tapakila efa nozaraina nefa marobe ireo mbola tsy nahazo. Ao koa ireo milaza fa miverina eto indray izahay rahampitso maraina amin’ny 08 ora ahazoana izany. » ,hoy ny fanazavan’i Volasoa. Mbola marobe, hoy izy ireo, miandry ny ambin’ireo fanampiana efa voazara ka manantena ny ahazo izany ny fianakaviany.
Amidy 10.000Ar ny tapakila
Voalazan’ireo mponina sasany fa mitaky vola 10.000Ar ny sefo Fokontany ho vidin’ny tapakila azahoana fanomezana. Tranga izay niseho teny Nanisana, omaly, hoy ny loharanom-baovao iray. « Tsy mandeha amin’ny fahamarinany intsony ny fizarana ny tapakila fa izay manome vola ny sefo fokontany ihany no mahazo izany. Mangataka izahay ny ijerena akaiky ny raharaha fa tsy mijery ny sahirana intsony ny olona ary manjaka ny kolikoly », hoy ny ambetin-teinin’ireo mponina. Ao koa ireo milaza fa tsy mety hizara ny tapakila ahazoana ny vatsy ny sefo fokontany, toy ny teny Androndra. Maro ireo olona nitokona teo anoloan’ny biraon’ny fokontany. Antony, nampitabataba sy nampihorakoraka ny mponina teny an-toerana. Vokany, nalain’ireo polisy ralehilahy ka nasainy niresaka tamin’ny vahoaka.
Araka izany, betsaka ireo mponina tezitra amin’ny ireo sefo fokontany, ao ny mangataka ny hanalana azy ireny.